Ukuphononongwa kwencwadi yamabali
Ukuphononongwa kwencwadi yamabali kunye nezicatshulwa
Trojan Horse 12. eBhetelehem
UDon Juan José Benítez uyayazi indlela yokuphosa ipisto njengaye nawuphi na omnye umntu. Uchungechunge lwakhe lweHashe leTrojan lufanelekile ubukrelekrele obuphezulu kwizinto, ifom, kunye nokuthengisa. Inyani kunye nentsomi zenza ikhonkco elingenakwahlulwa elihamba kunye nesavenge ngasinye njengomdaniso weDNA ophawula ikamva lokujika. Y...
Yonke into iyatsha, nguJuan Gómez-Jurado
Isisondeze ekutshiseni okuzenzekelayo ngobushushu obuyenziwe bubushushu ngaphambi kwexesha, le "Yonke into iyatsha" nguJuan Gómez-Jurado iza kufuthanisela iingqondo zethu ngakumbi ngesinye sezicwangciso zayo ezinamacala amaninzi. Kuba into eyenziwa ngulo mbhali kukunika iprotagonism ekwabelwana ngayo kwizicwangciso zakhe. Akukho nto ingcono kule nto ...
ULazarillo de Tormes, ibali elincinci elincinci
Inyani yokuba iyinoveli engaziwa inokuba yamkhulula umbhali wayo kuphononongo olusisishwankathelo kunye novavanyo lwexesha lakhe. Ngenxa yokuba yapapashwa emva phaya ngo-1554, "Ubomi bukaLazarillo de Tormes kunye nethamsanqa kunye neenkxwaleko", njengoko ibizwa ngokuba kwisihloko sayo esipheleleyo, yayi...
Amagama esiwaphathisa emoyeni, nguLaura Imai Messina
Ukufa kuchazwa xa ingeyiyo indlela efanelekileyo yokuphuma kwindawo. Kuba ukushiya eli hlabathi kucima yonke inkumbulo. Into engazange ibe yendalo ngokupheleleyo kukufa kwaloo mntu simthandayo ebesoloko ekho, nangaphantsi kwintlekele epheleleyo. Eyona lahleko ibingalindelekanga...
IBlue Sky, nguDaria Bignardi
Sekulithuba elide ukusukela oko umvandedwa wentliziyo ushiye i-romanticism ukwenza idinga kwi-psychiatrist, njengonyana wommelwane wonke. Ukubalisa ukuba intlungu ekrwada ithatha omnye umlinganiso kwizandla zikaDaria Bignardi. Kuba imalunga nokukhulula iintsizi ukuba bayishiye bodwa phambi kweNdalo…
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha98 Elandelayo →